Torolàlana amin'ny tsena
International Trade Mart (Distrika 1)
International Trade Mart (Distrika 2)
International Trade Mart (Distrika 3)
International Trade Mart (Distrika 4)
International Trade Mart (Distrika 5)
YIWU, Sina, 12 Mey 2020 / PRNewswire / - Tamin'ny 10 Mey 2020, nesorina ny hetsika an-tserasera 2020 Andron'ny marika China.
Fotoana fandefasana: Jun-02-2020
YIWU, Sina, 12 Mey 2020 / PRNewswire / - Tamin'ny 10 Mey 2020, nesorina ny hetsika an-tserasera 2020 Andro Brand China. Amin'ny maha hetsika lehibe iray isan-taona ny marika eo amin'ny tsenan'i Yiwu, ny Yiwugo Top 10 mpivarotra fifaninanana dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fizotry ny fifidianana. ...Hamaky bebe kokoa »
nandefa fandrisihana hanala ny varotra fiara mba hanefana ny fiatraikan'ny COVID-19 amin'ny tsena fiara eo an-toerana.
Shanghai (Gasgoo) - Yiwu, ekena ho tsena fivarotana kojakoja lehibe indrindra eto an-tany, dia nanentana hampiakatra ny varotra fiara mba hanimbana ny fiatraikan'ny COVID-19 amin'ny tsena fiara eo an-toerana. Ny fiara lafo vidy kokoa dia wo ...Hamaky bebe kokoa »
Zhongnan Import and Export Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2011
Zhongnan Import and Export Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2011 ary miorina amin'ny tanàna kely maneran-tany malaza-Yiwu, Sina Ny orinasa dia manizingizina amin'ny famoronana tetikasa fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny kilasy voalohany qu ...Hamaky bebe kokoa »
Aza misalasala mifandray aminay. Vonona hanampy anao hatrany izahay.
Address: Efitra 2602, Fizarana 2, tranobe 3,
World Trade Center, Tanànan'i Yiwu
YIWU, Sina, 12 Mey 2020 / PRNewswire / ...
nandrisika ny fampiakarana fiara amin'ny ...
Zhongnan Import and Export Co., Ltd. dia ...